Mbido Okwu nke Service
Site na ịnweta techbuild.africa si website.com, ị na-ekweta ugbu a ka agbụ gị na weebụsaịtị na Usoro Ojiji. Kwetakwara na iwu ji gị idebe iwu obodo. Y’oburu n’inweghi ekwenye n’otu n’ime usoro ndia, aga egbochi gi technweta techbuild.africa. Ihe ndị dị na weebụsaịtị a bụ echebe site nwebisiinka na ụghalaahịa iwu.
Ikike nyere nwa oge ibudata otu akwụkwọ nke ihe ọ bụla na techbuild.africa maka nlele nkeonwe, nke na-abụghị nke azụmahịa, ma ọ bụ nke na-agafe agafe. Nke a bụ onyinye nke ikike, ọ bụghị inyefe aha. Yabụ, n'okpuru ikike a, ị gaghị:
jiri ihe maka ebumnuche azụmahịa ọ bụla ma ọ bụ ngosipụta ọhaneze;
gbalịa ịgbanwe engineer ọ bụla na ebe nrụọrụ weebụ nke ụlọ ọrụ ahụ;
wepu nwebiisinka ma ọ bụ akwụkwọ ikikere ndị ọzọ sitere na ihe;
nyefee onye ọ bụla n'ime ihe ndị ahụ ma ọ bụ "mirror" ha na nke ọ bụla ọzọ; sava
Mmebi ọ bụla nke mgbochi ndị a ga-ahapụ techbuild.africa enweghị nhọrọ kama ịkwụsị ohere gị. Mgbe ịchisịrị, ikike ị na-elele ga-akwụsị. Dị ka nke a, ị ga-emerịrị ibibi ihe ọ bụla ebudatara na ihe onwunwe gị ma ọ dị na mbipụta ma ọ bụ na kọmputa.
Ekwesịrị ka ewere ihe niile dị na techbuild.africa ka ha siri dị. Companylọ ọrụ ahụ enyeghị ikike, ma ekwupụta ma ọ bụ gosipụta, ya mere, a gaghị aza ya maka ịnye nkwa ụgha ọ bụla. Ọzọkwa, ọ naghị eme nnọchite anya ọ bụla gbasara izi ezi na ntụkwasị obi nke ihe na weebụsaịtị ya ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ; metụtara ụdị ihe ndị ahụ 'dị na saịtị ọ bụla jikọrọ weebụsaịtị a.
techbuild.africa ma ọ bụ ndị na-eweta ya agaghị aza ajụjụ maka mmebi ọ bụla nwere ike ibilite site na iji ma ọ bụ enweghị ike iji ihe na weebụsaịtị ya; ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ma ọ bụ onye nnọchi anya nyere ikike na-elekọta weebụsaịtị amarala ọkwa banyere mmebi ụdị mmekpa ahụ, ma ọ bụ ọnụ ma ọ bụ ederede. Fọdụ ikike anaghị enye ikike na ikike ikikere ma ọ bụ njedebe nke ibu maka mmebi ihe ọghọm, njedebe ndị a nwere ike ọ gaghị emetụta gị.
5. Ntughari na Errata
Ihe ndị na-egosi na techbuild.africa nwere ike ịnwe njehie ọrụ aka, ederede ederede, ma ọ bụ foto. techbuild.africa anaghị ekwe nkwa na ihe ọ bụla dị na weebụsaịtị ya ga-abụ nke ziri ezi, zuru ezu, ma ọ bụ ugbu a. Companylọ ọrụ ahụ nwere ike ịgbanwe ihe ndị dị na weebụsaịtị ya n'oge ọ bụla na-enweghị ọkwa. Agbanyeghị, techbuild.africa anaghị eme ntinye ọ bụla iji melite ụdị a.
techbuild.africa enyochabeghị saịtị niile ejikọtara na weebụsaịtị ya ma ọ bụghị maka ọdịnaya nke saịtị ọ bụla ejikọtara. Ọnụnọ njikọ ọ bụla apụtaghị nkwado nke saịtị ahụ ebe o si. Ojiji nke weebụsaịtị ọ bụla jikọrọ dị na njirimara onye ọrụ.
7. Ngbanwe usoro eji saịtị
techbuild.africa nwere ike gbanwee Usoro Ojiji a maka weebụsaịtị ya n'oge ọ bụla na-enweghị ọkwa ọkwa. Site n'iji weebụsaịtị a, ị na-ekwenye na njikọ nke usoro ndị a na ọnọdụ ojiji ugbu a ga-agbakwunye gị.
8. Iwu na-achị achị
Ọ bụla na-ekwu metụtara techbuild.africa ga-achịkwa iwu nke mba na-enweghị banyere ya esemokwu nke iwu ndokwa.